राष्ट्रपति ट्रम्पको हत्या गर्नेलाई तीन मिलियन डलर पुरस्कार : इरानी नेता हमजेह - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
एजेन्सी । इरानका एक नेताले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हत्या गर्ने जो कसैलाई पनि ३ मिलियन डलर इनाम दिने घोषणा गरेका छन । केन्द्रीय कर्मान प्रान्तका संसदीय सभापति अहमद हमजेहले भने, हामी ट्रम्पलाई मार्ने मानिसलाई तीन लाख डलर पुरस्कार दिन्छौं।
म तपाइहरुलाई बताउन चाहन्छु, दिवगत कासिम सुलेमानी इरानको सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य कमाण्डर र गुप्तचर प्रमुख मेजर जनरल थिए। जनरल सुलेमानी इस्लामिक क्रान्तिकारी गार्ड कोर्प्सको अध्यक्षता गरिरहेका थिए। इरानी नेता आयोतोल्लाह खुमेनीका दाहिने हात कासिम सुलेमानी अमेरिकी ड्रोन हमलामा इराकमा मारिएका थिए । सुलेमानीको हत्यापछि उनकाे स्थान समालेका इरानका नयाँ जनरल इस्माईल कवानीले अमेरिकासँग उचित समयमा बदला लिने संकल्प गरेका थिए।
डेली मेलको रिपोर्टका अनुसार मंगलबार एक भाषणमा हमजेहले घोषणा गरेका थिए। सुलेमानीको हत्याले अमेरिकालाई बढी खतरनाक बनाएको छ । किनभने ईरानका जनता यसको बदला लिन चाहन्छन। अमेरिकाले कासिम सुलेमानीलाई मार्नुकाे कारण उसले अमेरिकी जनतालाई मार्न गरेकाे षड्यन्त्रलाई उल्लेख गरेकाे थियाे । अमेरिकी दाबीलाई हमजेहले खिल्ली उडाउँदै भनेका छन । के कासिमलाई मारेर अमेरिका सुरक्षित हुन्छ ? याे कदापी सम्भव छैन ।
साथै उनले अमेरिका प्रति राेषपूर्ण अभिव्यक्ती दिदै भनेका छन । ” के हामीलाई प्रतिबन्धात्मक आक्रमणमा तपाईंको सबै लक्ष्यहरू नष्ट गर्न अनुमति छ ? सन २०१५ काे आणविक सम्झौताको बारेमा हमजेहले भनेका थिए, “यदि आज हामीसँग आणविक हतियार भएको भए हामी आफूलाई यस खतराबाट जोगाउने थियौं”।